Washington DC Tour Guide dia aingam-panahy amin'ny hoavin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany manerantany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Washington DC Tour Guide dia aingam-panahy amin'ny hoavin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany manerantany
Handeha mody any Yaounde, Kamerona i Francoise Kameni Lele noho ny asa tsy misy fitiavan-tena an'ny mpitarika fizahan-tany tsy an'asa antsoina hoe Maricar Donato avy any Washington DC, Mistral Anampa avy any Maryland, David Herb ary Clara Sachs avy any New Jersey, Etazonia.
COVID-19 dia tsy afaka manimba ny fanoloran-tena ataon'ny tena mpitondra amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ireto mpitarika marina ireto dia mpitarika ny fizahan-tany sy mpikambana ao amin'ny Fikambanam-pirenena manerantany momba ny Fikambananan'ny mpizahatany. (WFTGA), eTurboNews nanambara azy ireo ho mahery fo eTN. Jereo ny horonantsary momba ny antony.
Ny tantara dia ny tantaran'ny mpizahatany iray tafatsoaka avy any Kamerona, antsoina hoe Francoise Kameni Lele. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary masoivohon'i Birao fizahantany afrikanina (ATB) any Kamerona. Nanomboka izany rehetra izany rehefa nandao an'i Kamerona nankany Berlin, Alemana izy.
Nikasa ny hanatrika ny fampirantiana ny dia ITB izy ary fivoriana 4 martsa nokarakarain'ny ATB, PATA ary SaferTourism ary ity famoahana ity. Mampihomehy fa nalamina ny fihaonambe hiresahana ny fiantraikan'ny Coronavirus amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany.
Nofoanana ny ITB ary hatramin'ny fotoana tsy nahitan'i Francoise ny làlana nody tany Kamerona. Niainga ho any New York izy, niverina tany Frankfurt, niverina tany New York indray, ary farany dia niondrana an-tsambo B787 Dreamliner ET509 nankany Addis Ababa. Traikefa nahatsiravina izany, saingy manana namana akaiky indrindra izy, izay mpitari-dia tsy miankina amin'ny fitiavan-tena ao Washington DC ary maherifon'ny eTN antsoina hoe Maricar Donato.
Nilaza i Maricar eTurboNews androany: "Ny nolazain'i Francoise ahy androany dia tena nisambotra ahy ary hanao izany mandritra ny fotoana maharitra. Hoy izy: Raha tsy noho ny fanampianao dia namono tena aho. "
Noterenan'ny polisy federaly alemanina ny mpandeha marary nampiditra ny United Airlines avy any Frankfurt ka hatrany Newark
Indostrian'ny fandriam-pahalemana sy finamanana ny fizahantany. Tsy misy mahalala an'io bebe kokoa amin'ny maha Louis D'Amore, filoha ary mpanorina ny Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany. Niantso avy tany an-tranony tany New York izy dia nilaza hoe:
“Nangoraka indrindra aho raha nahalala ireo fahasarotana maro tsy maintsy niaretan'i Francois vokatry ny Pandemie. 20 taona mahery no nahalalako an'i Francois. Francoise dia naneho ny tenany tsy tapaka tamim-pitiavan-tena mba hanome anjara biriky ho amin'ny tombontsoa lehibe kokoa amin'ny fizahantany afrikanina. Mampihetsi-po tokoa ny mahafantatra ny niarahan'ny mpitari-dàlana fizahan-tany avy amin'ny foko sy finoana isan-karazany nanampy an'i Francois tamin'ny fotoanany nilatsaka - naneho ny tena fitiavana mandray vahiny sy ny fotokevitra fototry ny finoana rehetra "Ataovy amin'ny hafa araka izay tianao hataony aminao" ary, amin'ny fandinihana ny maha-Kristiana anao mandritra ity herinandro fahadimin'ny Paska ity, "Mifankatiava tahaka ny nitiavako anao."
Androany dia nandao an'i Newark, New Jersey i Francoise Kameni Lele tamin'ny sidina fiaramanidina Ethiopian Airlines nankany Addis Ababa. Handeha mody any Yaounde any Kamerona ihany izy amin'ny farany.
Herinandro talohan'izay dia nandefa tao amin'ny Facebook-ny i Maricar ary nilaza hoe: Maricar Donato, solontenan'ny faritra ary mpandrindra ny federasiona manerantany ho an'ny Fikambananan'ny mpizahatany dia nitarika ny ezaka fanampiana ny mpiara-mitory amintsika.
I François koa dia VP an'ny kaonfederasiona afrikanina afrikanina ka tsy maintsy nitondra azy tany amin'ny Akademia ho an'ny tanora sy Nats Park aho. Fanatanjahan-tena tsara sy andro nahafinaritra izany.
Tratra teo afovoan'ny firenena nanidy sisintany i Francoise ary tsy afaka nody intsony araka ny fandaharam-potoana 2 volana lasa izay. Ny fikasana ny hiala dia tapaka vetivety tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Frankfurt rehefa nolavina ny fandehanany tany Frantsa mba hisidina sidina ho any Kamerona ary hiverina any Etazonia.
Taorian'ny nahatongavany tany Etazonia, trano fandraisam-bahiny iray, Francoise iray hafa no nijanona nikatona rehefa niparitaka be ny virus tany New York. Niainga nankany Washington DC izy ary nanantena koa fa hahazo fanampiana avy amin'ny masoivohon'izy ireo.
Rehefa eTurboNews namoaka ny tantarany eTN Reader Maricar Donato dia nanantona an'i Francoise tamin'ny andraikiny tamin'ny naha ambasadaoron'ilay Fikambanam-pirenena manerantany momba ny Fikambananan'ny mpizahatany. (WFTGA)
Tsy nisy raharaham-barotra ho an'ny miasa any Maricar, fa tsy nanakana azy hampiasa ny volany sy ny fotoanany hanampiana ny mpiara-miasa aminy amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Nikatona ny trano fandraisam-bahiny dia nandamina ny efi-trano ambany rihana iray izy, tao amin'ny mpikambana iray ao amin'ny fiarahamoniny ho an'ny Francoise.
Androany ny mpitari-dia WFTGA dia Mistral Anampa avy any Maryland, David Herb ary Clara Sachs avy any New Jersey no nitondra an'i Francoise avy any Washington DC ka hatrany amin'ny Newark International Airport any New Jersey. Niaraka tamin'ny solontenan'ny Masoivohon'i Kamerona any Etazonia izy ireo dia nanao izay hahazoana antoka fa nanamarina i Francoise ary niditra an-tsambo nankany Afrika.
Ny hafatra fanaovam-beloma nataony eTurboNews Hoy izy: “Jürgen, eo am-bavahady fidirana aho ary handeha hody. COVID19 dia hampiato ny fizahan-tany i Nevers. Ny lanitra no fetranao. ”
Henoy ny tatitra momba ny tafatafa sy ny fiainana avy any amin'ny Newark Airport:
WFTGA dia fikambanana manerantany ary mpikambana miavonavona an'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany (ICTP)
Ny filohan'ny fikambanana ankehitriny dia Alushca Ritchie avy any Capetown South Africa. Alushca Ritchie dia nahafeno fepetra ho mpitari-dalana ho an'ny Western Cape of South Africa tamin'ny 2010. Nanjary mpikambana tao amin'ny komitin'ny Association Cape Tourist Guides Association izy tamin'ny taona 2011 ary niasa ho CEO hatramin'ny taona 2013. Izy dia mirotsaka amin'ny fandraisana andraikitra manokana antsoina hoe Cape Tourist Guide Connection ary manampy amin'ny Sekretariam-pirenenan'ny Serivisy any Afrika Atsimo. Alushca dia mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny fizahantany any Cape Town ihany koa. Voafidy ho ao amin'ny Birao WFTGA izy tamin'ny 2015 ary voatendry ho Administrator. Voafidy ho filoham-pirenena WFTGA i Alushca tamin'ny taona 2017 sy 2019.